येशू किन मर्नुप ?्यो? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
येशूको काम आश्चर्यजनक फलदायी थियो। उसले हजारौं मानिसहरूलाई शिक्षा दियो र निको पार्यो। उसले ठूला दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्‍यो र अधिक व्यापक प्रभाव पार्न सक्थ्यो। ऊ अन्य इलाकामा बस्ने यहूदीहरू र गैर-यहूदीहरू भएको ठाउँमा जान्छ भने ऊ हजारौंलाई निको पार्न सक्थ्यो। तर येशूले आफ्नो कामलाई अचानक अन्त्य हुन दिनुभयो। उनी पक्राउ पर्ने अवस्थाबाट जोगिन सक्थे तर आफ्नो प्रचारको प्रसार संसारमा फैलाउनुको सट्टा मर्ने छनौट गरे। उनका शिक्षाहरू महत्त्वपूर्ण थिए, तर ऊ केवल शिक्षा दिन मात्र आउँदैनथ्यो तर मर्न पनि आयो र आफ्नो मृत्युसँगै उसले आफ्नो जीवनमा भन्दा बढी गर्यो। येशूको कामको लागि मृत्यु नै मृत्युको महत्त्वपूर्ण भाग थियो। जब हामी येशूको बारेमा सोच्छौं, हामी क्रसलाई क्रिश्चियनको प्रतीकको रूपमा लिन्छौं, रोटी र मद्यको संस्कारको रूपमा। हाम्रो उद्धारक एक मुक्तिदाता हुनुहुन्छ जो मर्नुभयो।
पुरानो नियमले भन्छ कि परमेश्वर धेरै पटक मानव रूपमा देखा पर्नुभयो। यदि येशू केवल च he्गाइ र सिकाउन चाहानु भएको भए, उहाँ केवल "देखा पर्न" सक्नुहुन्थ्यो। तर उसले अधिक गर्यो: ऊ मानव भयो। किन? ताकि ऊ मर्न सकोस्। येशूलाई बुझ्नको लागि हामीले उहाँको मृत्युलाई बुझ्नु आवश्यक छ। उसको मृत्यु मुक्तिको सन्देशको केन्द्रिय अंश हो र यसले सबै इसाईहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ।
येशूले भन्नुभयो कि "मानिसका पुत्र आउँदैनन्, कि उहाँ सेवा दिनुहुनेछ, तर उहाँ आफ्नो जीवन बचाउनुहुनेछ र बचाउनुहुनेछ [भीड बाइबल र एल्बरफेल्ड बाइबल: छुडौतीको रूपमा] धेरैलाई"। २०:२:20,28) ऊ मर्नको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्न आएको थियो; उसको मृत्युले अरुहरूका लागि "मुक्ति किन्नुपर्दछ"। उहाँ पृथ्वीमा आउनुको मुख्य कारण यही थियो। उसको रगत अरूको लागि पोखिएको थियो।
येशूले आफ्ना कष्ट र मृत्युको बारेमा चेलाहरूलाई घोषणा गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेनन्। "त्यसबेलादेखि, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यरूशलेम कसरी जाने र एल्डरहरू, प्रधान पूजाहारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै यातना भोग्नु पर्ने र मारिन र तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुने कुरा देखाउन थाल्नुभयो। पत्रुसले येशूलाई अलग्ग लगे अनि भने, “परमेश्वरले तपाईंलाई बचाउनु भयो, प्रभु! तपाईले त्यो पाउनुहुन्न! » (गणित। १,, २१-२२।)
येशू जान्नुहुन्थ्यो कि उहाँ मर्नु पर्छ किनभने यो यस्तो लेखिएको थियो। "... अनि मानिसका पुत्रले कसरी धेरै कष्ट सहनु पर्छ र तुच्छ तुल्याउनु पर्छ भनेर कसरी लेखिएको छ?" (मर्कूस :9,12: १२;,, 9,31१; १०,10,33--34।) he र उनले मोशा र सबै भविष्यवक्ताहरूसँगै शुरू गरे र सबै धर्मशास्त्रमा उनको बारेमा के भनियो भनेर उनीहरूलाई वर्णन गरे ... त्यसैले यो लेखिएको छ कि ख्रीष्ट कष्ट भोग्नुहुनेछ र तेस्रो दिनमा उहाँ बौरेर उठ्नुहुनेछ » (लूका २:24,27:२:46 र))
सबै कुरा परमेश्वरको योजना अनुसार भयो: हेरोद र पिलातसले परमेश्वरको हात र निर्णय "केवल पहिले हुनुपर्दछ" मात्र गरे (प्रेरित १:)) गेत्समनीको बगैंचामा उसले प्रार्थना गर्यो कि अरू केही थिएन। त्यहाँ कोही पनि थिएन (लूका २२..22,42२) हाम्रो उद्धारको लागि उहाँको मृत्यु आवश्यक थियो।
यो कहाँ लेखिएको थियो? स्पष्ट भविष्यवाणी यशैया 53 53,12 मा पाउन सकिन्छ। येशू आफैले यशैया:१२ उद्धृत गर्नुभयो: "किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु: जे ममा पूरा हुन्छु, त्यो लेखिएको हुनुपर्दछ: 'ऊ कुकर्मीहरूमा गनिन्छ।' किनकि मेरो लेखिएको कुरा पूरा हुनेछ » (लूका २२..22,37२) येशू, पापरहित, पापीहरुमा गनिनु पर्छ।
यशैया 53 मा के लेखिएको छ? "वास्तवमा, उहाँ हाम्रो बिमारी बोक्नुभयो र हाम्रो पीडाले हामीलाई बोझ दिनुभयो। हामीले सोचेका थियौं कि उहाँ उहाँ नै हुनुहुन्छ जो पीडित र पिटेका र ईश्वरले यातना दिएका थिए। तर ऊ हाम्रो पाप [धर्मत्याग, धर्मत्याग] को कारण घाइते भयो र हाम्रो पापको लागि छिन्नभिन्न भयो। दण्ड पाए पछि उसलाई शान्ति छ, र उसको घाउहरु मार्फत हामी निको भयौं। हामी सबै भेडाझैँ भड्किएका थियौं, सबैले उसको बाटो हेरिरहेका थिए। तर प्रभुले हाम्रा सबै पापहरू उहाँमा फ्याँकिदिनुभयो। (पद 4-।)
ऊ "मेरो मानिसहरुको पापको लागि ग्रस्त थियो ... यद्यपि उसले कुनै गलत गरेन ... प्रभुले उनलाई बिरामी पार्नु चाहानुहुन्छ। जब उसले अपराधको शिकार भएर आफ्नो जीवन दियो ... उसले उसका पापहरू बोक्दछ ... उसले धेरैको पापहरू बोक्दछ ... र ती पापीहरूका लागि प्रार्थना गर्दछ » (पद 8-।) यशैयाले त्यस्तो व्यक्तिको चित्रण गर्दछ जुन अरूको पापको लागि दु: ख पाउँदैन, तर अरूको पापको लागि।
यो व्यक्ति "जीवितहरूको देशबाट टाढा हुनु पर्छ" (पद)), तर त्यो कथाको अन्त्य होइन। यो "ज्योति हेर्न र प्रशस्त हुनु पर्छ। र उसको ज्ञानबाट उसले मेरो दास, धार्मिक, धेरैलाई न्याय प्रदान गर्नेछ ... ऊ सँधै सन्तान जन्माउनेछ र लामो समय बाँच्नेछ » (पद ११ र १०)
यशैयाले के लेखेका थिए, येशूले पूरा गर्नुभयो। उनले आफ्नो भेडाको लागि आफ्नो जीवन दिए (यूहन्ना १०:१:10)। उनको मृत्युको साथमा उनले हाम्रा पापहरू स्वीकार गरे र हाम्रा अपराधहरूका लागि कष्ट भोगे; हामीले सजाय पाएका छौं ताकि हामी परमेश्वरसित शान्ति कायम गर्न सक्छौं। उहाँको दु: ख र मृत्युबाट हाम्रो प्राणको बिमारी निको भयो; हामी धर्मी ठहरिन्छौं - हाम्रा पापहरू हटाइन्छन्। यी सत्यताहरू नयाँ नियममा विस्तार र गहिरो हुँदैछन्।
लाज र अपमानमा मृत्यु
व्यवस्था २१:२:5 मा भनिएको छ, “झुण्डयाइएका मानिसलाई परमेश्वरले सराप दिनु भएको छ।” यस पदको कारण, यहूदीहरूले हरेक क्रूसमा परमेश्वरको सराप देखे र यशैयाले लेखेका अनुसार यसलाई "भगवानले प्रहार गरे"। यहूदी पुजारीहरूले सोचेका होलान् कि यसले येशूका चेलाहरूलाई डराउने र पक्षाघात पार्नेछ। वास्तवमा, क्रूसमा तिनीहरूको आशा समाप्त भयो। अस्वीकृत, तिनीहरूले स्वीकारे: "हामीले ... आशा गर्यौं कि उसले नै इस्रायललाई छुटकारा दिनेछ" (लूका २२..24,21२) पुनरुत्थानले उनको आशालाई पुनर्स्थापित गर्यो र पेन्टेकोस्टल आश्चर्यकर्मले उनलाई मुक्तिदाता भनेर घोषणा गर्ने नयाँ साहस देखायो कि एक लोकप्रिय नायक, जो लोकप्रिय मान्यता अनुसार, एक निरपेक्ष एन्टिरो थियो: क्रूसमा टाँगिएको मसीह।
“हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर,” पत्रुसले महासभा समक्ष घोषणा गरे, “जसलाई तिमीले काठमा झुण्ड्याएर मार्‍यौ, येशूलाई उठाइयो” (प्रेरित १:)) "होल्ज" मा पत्रुस क्रूसको आवाजमा मृत्युको पूरै बेइज्जती गर्छन्। उनी भन्छन्, लाज येशूमा पर्दैन - यो उहाँ क्रूसमा टाँगिएकाहरूमा पर्छ। परमेश्वरले उनलाई आशिष् दिनुभयो किनभने ऊ आफैंले भोगेको श्राप पाउन योग्यको थिएन। परमेश्वरले यो कलंकलाई उल्ट्याउनुभयो।
पावलले गलाती 3,13:१ मा पनि त्यहि श्रापको बारेमा बोले: "तर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त गर्नुभयो, किनकि यो हाम्रो लागि श्राप हो; किनकि लेखिएको छ: 'काठमा झुण्डिएको हरेक श्रापित हो' ... »येशू हाम्रो सट्टामा हाम्रो अभिशाप बन्नुभयो, ताकि हामी व्यवस्थाको श्रापबाट स्वतन्त्र हुन सकौं। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो जुन उहाँ हुनुहुन्नथ्यो, ताकि हामी त्यस्तो चीज हुन सक्दछौं जुन हामी छैनौं। "किनकि उहाँ एक जना हुनुहुन्छ जसले हामीलाई कुनै पाप थाहा थिएन, हाम्रो लागि पापमा पार्नुभयो, ताकि हामी परमेश्वरसामु धर्मी बन्न सकौं"। (२ कोरि।
येशू हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो ताकि हामी उसलाई मात्र घोषणा गर्न सक्छौं। किनभने हामीले भोग्नु पर्ने दण्ड उहाँ भोग्नुभयो, उहाँले हामीलाई श्रापबाट मुक्त गर्नुभयो - सजायबाट - व्यवस्थाबाट। "शान्ति पाए पछि उसलाई सजाय दिइन्छ।" किनभने उसले सजायँ भोगेको छ, हामी परमेश्वरसँग शान्तिको आनन्द लिन सक्छौं।
येशू मर्नु भएको घिनलाग्दो तरिका चेलाहरूले बिर्सेनन्। कहिलेकाहिँ उनी उनको प्रचारको केन्द्रबिन्दु पनि थिए: "... तर हामी क्रूसमा टाँगिएको ख्रीष्टको प्रचार गर्दछौं, यहूदीहरूलाई कष्ट र ग्रीकहरूलाई मूर्खता"। (१ कोरि। १:२:1) पावलले सुसमाचारलाई “क्रूसको वचन” समेत भने। (पद १ 18) उसले गलातीहरूलाई भन्छ कि उनीहरूले ख्रीष्टको सही चित्रलाई बिर्सेका छन: "तिमीलाई कसले मंत्रमुग्ध गरायो जसलाई जसको तर्फ येशू क्रूसमा टाँगिनुभयो जसको आँखाको सामु चित्रण गरिएको थियो?" (गला।:: १) यो सुसमाचारको मूल सन्देश थियो।
किन क्रस "सुसमाचार", शुभ समाचार हो? किनकि हामीलाई क्रूसमा मुक्त गरियो र हाम्रा पापहरू उनीहरूलाई योग्य दण्ड दिइए। पावल क्रूसमा केन्द्रित छन् किनकि यो येशू मार्फत हाम्रो मुक्तिको लागि महत्वपूर्ण छ।
जब हामी ख्रीष्टमा "परमेश्वरसामु" धर्मी ठहरिएका हुन्छौं तबसम्म हामी पापी जीवनको लागि .ण चुक्ता नगरेसम्म हामी पुनरुत्थान हुने छैनौं। केवल त्यसपछि हामी येशूको महिमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ।
"हाम्रोलागि" येशू मर्नुभयो, पावल भन्छन् (रोमी:: 5,6--;; २ कोरिन्थी :8:१:2; १ थिस्स। :5:१०); र "हाम्रा पापहरूका लागि" उनी मरे (१ कोरि। १.1..15,3; गला। १.1,4) उसले "हाम्रो आफ्नै पाप माथि उठायो ... काठमा उसको शरीरमा" (१. पेट्रो २,२;; 1.१2,24) पावल भन्छन् कि हामी ख्रीष्टसंगै मरे (रोमी .6,3..8-) उहाँमा विश्वास गरेर हामी उसको मृत्युमा सहभागी हुन्छौं।
यदि हामीले येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्यौं भने, उहाँ हाम्रो मृत्युको रूपमा गनिनुहुन्छ; हाम्रा पापहरू उहाँ जस्तै छन् र उहाँको मृत्युले ती पापहरूको दण्ड दिन्छ। यो मानौं कि यदि हामी क्रूसमा झुण्डिएका थियौं, मानौं हाम्रा पापले ल्याएको श्राप हामी पाइरहेका छौं। तर उसले यो हाम्रो लागि गर्‍यो, र किनभने उसले यो गर्‍यो, हामी धर्मी ठहरिन सक्छौं, जसलाई उचित ठानिन्छ। उहाँ हाम्रो पाप र हाम्रो मृत्यु लिनुहुन्छ; उहाँले हामीलाई न्याय र जीवन दिनुहुन्छ। राजकुमार भिखारी केटा भएको छ ताकि हामी राजकुमार बन्न सकौं।
बाइबलले येशूको फिरौतीलाई बताउँछ (छुटकाराको पुरानो अर्थमा: रिलीज गर्नुहोस्, नि: शुल्क खरीद गर्नुहोस्) हाम्रो लागि, तर छुडौती कुनै विशेष संस्थालाई भुक्तान गरिएको छैन - यो एक लाक्षणिक वाक्यांश हो जुन यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि यसले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नको लागि उसले अविश्वसनीय रूपमा उच्च मूल्य तिरेको छ। , "तिमीहरू साँच्चिकै किनेका थियौ," पावलले येशूमार्फत छुटकाराको वर्णन गरे: यो लाक्षणिक वाक्यांश पनि हो। येशूले हामीलाई "किन्नुभयो", तर कसैलाई "भुक्तान" गर्नुभएन।
कसै-कसैले भनेका छन् कि बुबाको कानुनी अधिकार पूरा गर्न येशू मर्नुभयो - तर तपाईं यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि यो बुबा आफैले नै गर्नुभयो जसले आफ्नो एक मात्र छोरोलाई पठाएर र यसका लागि मूल्य तिर्नुभयो। (यूहन्ना :3,16:१:5,8; रोमी::)) ख्रीष्टमा परमेश्वर आफैले दण्ड लिनुभयो - ताकि हामीलाई त्यो चाहिंदैन; «किनकि परमेश्वरको अनुग्रहले उसले सबैका लागि मृत्युको स्वाद लिनुपर्दछ» (हिब्रू २.2,9)
परमेश्वरको क्रोधबाट भाग्नुहोस्
परमेश्वर मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ - तर ऊ पापलाई घृणा गर्दछ किनकि पापले मानिसहरूलाई हानी गर्छ। त्यसकारण त्यहाँ "क्रोधको दिन" आउँनेछ जब परमेश्वरले संसारको न्याय गर्नुहुन्छ (रोमी १.१1,18; २.।)
जसले सत्यलाई अस्वीकार गर्दछ उसलाई दण्ड दिइनेछ (2, 8)। जसले ईश्वरीय अनुग्रहको सत्यलाई अस्वीकार गर्दछ उसले भगवानको नकारात्मक पक्ष, क्रोधलाई थाहा पाउनेछ। सबैले पश्चाताप गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (२. पेट्र। 2,)), तर जसले पश्चाताप गर्दैन उसले आफ्नो पापको परिणामहरु महसुस गर्नेछ।
हाम्रा पापहरू येशूको मृत्युमा माफ गरियो र उहाँको मृत्युले हामी परमेश्वरको क्रोध, पापको दण्डबाट बच्दछौं। तथापि, यसको मतलब यो होइन कि एक मायालु येशूले क्रोधित परमेश्वरलाई शान्त गराउनुभयो वा एक अर्थमा "चुपचाप किन्नुभयो"। येशू पिता जस्तो पापसँग क्रोधित हुनुहुन्छ। येशू पापीहरूलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँ तिनीहरूको पाप भुक्तानी गर्नुहुन्छ, उहाँ विश्व न्यायाधीश मात्र हुनुहुन्न, उहाँ निन्दा गर्ने संसारका न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। (गणित। २,,25,31१- .46)
जब भगवानले हामीलाई माफ गर्नुहुन्छ, उहाँ केवल पाप धोई दिनुहुन्छ र कहिल्यै अस्तित्वमा छैन भनेर ढोंग गर्नुहुन्छ। नयाँ नियममा उनले हामीलाई सिकाउँछन् कि येशूको मृत्युले पापमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। पापको गम्भीर परिणामहरू छन् - ती परिणामहरू जुन हामी ख्रीष्टको क्रूसमा देख्न सक्छौं। यसको लागि येशूले पीडा, बेइज्जती र मृत्यु खर्च गर्नुभयो। हामीले पाउनु पर्ने सजाय उसले भोग्नुप .्यो।
जब हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ परमेश्वरले धर्मी कार्य गर्नुहुन्छ भनेर सुसमाचारले प्रकट गर्दछ (रोमी १:१:1,17)। उसले हाम्रा पापहरूलाई बेवास्ता गर्दैन, तर येशू ख्रीष्टमा तीमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। "उसको विश्वासको लागि परमेश्वरले उसको रगतमा प्रायश्चितको रूपमा बनाउनु भयो ताकि उनको धार्मिकता प्रमाणित भयो"। (रोमी :3,25:२)। क्रूसले परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ भनेर देखाउँदछ। यसले देखाउँदछ कि पाप बेवास्ता गर्न धेरै गम्भीर छ। यो उचित छ कि पापको सजाय होस्, र येशूले स्वेच्छाले हाम्रो सजायलाई स्वीकार गर्नुभयो। क्रूसले परमेश्वरको धार्मिकता बाहेक, परमेश्वरको प्रेम पनि देखाउँदछ (रोमी १:१:5,8)।
यशैयाले भनेझैं: हामीसँग परमेश्वरसँग शान्ति छ किनकि ख्रीष्टलाई दण्ड दिइयो। हामी कुनै समय परमेश्वरबाट टाढा थियौं तर अब हामी उहाँमार्फत परमेश्वरको नजिक आइसकेका छौं (एफि। २,१।) अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी क्रूसमा परमेश्वरसँग मिलाप गर्दछौं (पद १ 16) यो ईसाई आधारभूत मान्यता हो कि परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध येशू ख्रीष्टको मृत्युमा निर्भर गर्दछ।
ईसाई धर्म: यो नियमहरूको सूची होईन। इसाईमत भनेको विश्वास हो कि ख्रीष्टले हामीले परमेश्वरसंग के गर्नु पर्ने सबै थोक गर्नुभयो - र उहाँले क्रूसमा गर्नुभयो। हामी "परमेश्वरसँग मिलापमा थियौं ... उनको छोराको मृत्युबाट जब हामी अझै शत्रु थियौं" (रोमी १:१:5,10)। ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले ब्रह्माण्डलाई “क्रूसमा उसको रगतको माध्यमले मिलाप गरेर” मिलाप गर्नुभयो (कल। १.२०) यदि हामी उहाँ मार्फत मेलमिलापमा छौं भने सबै पापहरू क्षमा भएका छन् (पद २२) - मेलमिलाप, क्षमा र न्यायको अर्थ सबै एक र एउटै हुन्: परमेश्वरसँग शान्ति।
मुक्तिका लागि पावलले एउटा चाखलाग्दो चित्रको प्रयोग गर्दछ जब उनले लेख्छन् कि येशूले "उनीहरूका शक्तिहरूका शक्ति र शक्तिहरू हटाउनुभयो र सार्वजनिक रूपमा उनीहरूलाई प्रदर्शन गर्नुभयो र उनीहरूलाई ख्रीष्टमा विजय दिनुभयो [ए। :: क्रस मार्फत] » (कल। १.२०) उसले सैन्य परेडको छवि प्रयोग गर्दछ: विजयी जनरलले विजयी जुलुसमा दुश्मन कैदीहरूलाई प्रदर्शन गर्दछ। तिनीहरू सशस्त्र छन्, अपमानित छन्, प्रदर्शनमा राखियो। पावलले यहाँ के भन्न चाहन्छन् कि येशूले यो क्रूसमा गर्नुभयो।
अपमानजनक मृत्युजस्तो देखिनु भनेको वास्तवमा परमेश्वरको योजनाको लागि एउटा मुख्य विजय हो, किनकि क्रूसमा मात्रै येशूले शत्रु शत्रुहरू, शैतान, पाप र मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। हामी विरुद्ध तपाईंको दावी निर्दोष पीडितको मृत्युबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएको छ। उनीहरूले पहिले नै भुक्तान गरिसकेका भन्दा बढीको लागि माग गर्न सक्दैनन्। उनको मृत्युको माध्यमबाट हामीलाई भनिएको छ, येशूले "मृत्युमाथि अधिकार गर्ने अर्थात् शैतान" बाट शक्ति लिनुभयो (हिब्रू २.2,14) «... परमेश्वरको पुत्र शैतानको कामहरू नष्ट गर्न देखा पर्‍यो» (१ यूहन्ना::)) क्रूसमा विजय प्राप्त भयो।
येशूको मृत्यु पनि सिकारको रूपमा वर्णन गरिएको छ। पुरानो नियमको बलिदानको समृद्ध परम्पराबाट बलिदानको अवधारणा झल्किन्छ। यशैयाले हाम्रो सृष्टिकर्तालाई “दोषी पीडित” भनेका छन (53,10)। बप्‍तिस्मा दिने यूहन्नाले उनलाई "परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप बोक्छन्" भन्छन् (जो। १,२)) पावलले उनलाई मेलमिलापको शिकार, पापको शिकार, निस्तार-चाडको थुमा र धूप बलिदानको रूपमा चित्रण गरे (रोमी 3,25..२8,3; .1..5,7; १ कोरि। 5,2; एफि। .XNUMX.२) हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रले उनलाई पापबलि भन्यो (10,12)। युहन्नाले उनलाई "हाम्रा पापहरुका लागि मेलमिलापको लागि बलिदान" भने (१ यूहन्ना २.२; 1.१०)।
त्यहाँ येशूले क्रूसमा गर्नुभएका केहि नामहरू छन्। व्यक्तिगत नयाँ नियमका लेखकहरूले यसको लागि बिभिन्न नियम र छविहरू प्रयोग गर्छन्। शब्दहरूको सहि छनोट, सटीक संयन्त्र निर्णायक हुँदैन। मुख्य कुरा यो हो कि हामी येशूको मृत्युले मुक्ति पाउँदछौं, कि केवल उहाँको मृत्युले मात्र मुक्ति खोल्दछ। "उसको घाउले हामीलाई निको पार्यो।" उहाँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्न, हाम्रा पापहरू छुटकारा दिन, सजाय भोग्न, हाम्रो मुक्तिको निम्ति मर्नको लागि मर्नुभयो। Ove प्रियहरू, यदि भगवान्‌ले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भने, हामीले एक अर्कालाई पनि प्रेम गर्नुपर्दछ » (१ यूहन्ना::))
उद्धार प्राप्त गर्दै: सात मुख्य सर्तहरू
ख्रीष्टको कार्यको समृद्धि नयाँ नियममा भाषा छविहरूको सम्पूर्ण दायरा मार्फत व्यक्त गरिएको छ। हामी यी छविहरूलाई दृष्टान्तहरू, ढाँचाहरू, रूपकहरू कल गर्न सक्छौं। प्रत्येक चित्र को एक हिस्सा पेन्ट:
फिरौती ("मोचन" को साथ लगभग एकमत): कसैलाई स्वतन्त्र गर्न मूल्य तिर्नु पर्ने। ध्यान मुक्तिको विचारमा हो, मूल्यको प्रकृतिमा होइन।
मुक्ति: शब्दको मौलिक अर्थमा "टाढा किनमेल" मा पनि आधारित छ, ख। दासहरूको नि: शुल्क खरीद।
औचित्य: परमेश्वरसामु दोषी भएको खण्ड जस्तै अदालतमा दोषमुक्त भए जस्तै।
उद्धार (मुक्ति): आधारभूत विचार मुक्ति वा एक खतरनाक अवस्था बाट मुक्ति हो। उपचार पनि छ, निको पार्छ, पूर्णतामा फर्कन्छ।
मेलमिलाप: टुक्रिएको सम्बन्धलाई पुन: स्थापना गर्दै। परमेश्वर हामीलाई आफैंमा मिलाप गर्नुहुन्छ। ऊ मित्रता पुनर्स्थापित गर्न कार्य गर्दछ र हामी उसको पहल गर्दछौं।
बाल्यावस्था: हामी भगवानका वैध सन्तानहरू हुन्छौं। विश्वासले हाम्रो वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउँछ: बाहिरी व्यक्तिहरूबाट परिवारका सदस्यहरू।
क्षमा: दुई तरिकाहरूमा देख्न सकिन्छ। कानुनी दृष्टिकोणबाट, क्षमा भनेको meansण रद्द गर्नु हो। व्यक्तिगत क्षमाको अर्थ व्यक्तिगत चोटलाई माफी गर्नु हो (एलिस्टर म्याक्राथका अनुसार, जिस्डिंग जिजस, पृ। १२124-१-135)।
माइकल मोरिसन द्वारा